ललितपुरवासीलाई खुशीको खबरः घरअगाडि फोहोर छ ? मोबाइल एपबाटै काम हुन्छ ! – Contemporary News Portal From Nepal
ललितपुरवासीलाई खुशीको खबरः घरअगाडि फोहोर छ ? मोबाइल एपबाटै काम हुन्छ !
प्रकाशित मिति: २३ पुष २०७३, शनिबार १०:३९
२३ मंसिर, काठमाडौं । ललितपुर उपमहानरपालिकाले सार्वजनिक स्थानबाट फोहोर नउठेको गुनासो, उजुरी तथा सूचना मोबाइल एप्समार्फत लिन सुरु गरेको छ ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा अग्रसर भएको उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रलाई सफा राख्न नागरिकले फोहोर थुप्रिएको सूचना दिन मिल्ने सुविधा मोबाइल एप्सबाटै सुरु गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाले आफ्नो सेवालाई प्रविधिसँग जोड्न भन्दै ‘हाम्रो ललितपुर’ नामको मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएको छ । यसलाई स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले एप स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्छन् ।
यो एप्स ललितपुर उपमहानगरभित्र बस्नेलाई यति उपयोगी हुने देखिएको छ कि यसले कार्यालयका काम कारवाहीबारे जानकारी दिन्छ नै, नक्सा पासलगायतका प्रक्रियामा आफ्नो फाइल कहाँ पुगेको छ भन्नेसम्म देखाउँछ । अन्य धेरै सूचना र सेवा पनि एप्समा छन् ।
तत्काल फोहोर उठ्ने
तर, यो एप्सको मुख्य विशेषता भने ‘सफा ललितपुर’ भन्ने मेनु नै हो । यो मेनुमार्फत नगरबासीले आफ्ना घर, टोल र छेउ-छाउका सडकमा थुपि्रएका फोहोर, निर्माण सामग्री, मरेका जनावर लगायतका बारेमा उपमहानगर पालिकालाई रिपोर्ट गर्न सक्नेछन् ।
एप्समार्फत दिइएको यो सूचना उपमहानगरको वातावरण महाशाखामा पुग्छ र तत्कालै त्यसलाई हटाउन टोली खटिनेछ ।
यो सेवाले नगरबासीलाई विभिन्न ठाउँमा फोहोर थुप्रिने तर, उपमहानगरलाई जानकारी नै नहुने अवस्थको अत्त्य हुने प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत भरतमणि पाण्डेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
एपमार्फत सूचना आउना साथ उपमहानगरपालिकाले फोहोर हटाउन समय नलगाउने पाण्डेले बताए ।
‘यो प्रविधिमार्फत उपमहानरभित्रबाट जसले पनि सूचना गर्न सक्छ । यो नगर सफा राख्ने अभियानमा सबैको साथ मिल्छ भन्ने अपेक्षा छ’ पाण्डले भने,’हामीले प्रविधिमार्फत नै फोहोर तथा फोहोरजन्य समाग्री समयमै उठान सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले यो सेवा प्रारम्भ गरेका छौं । अब नागरिकले यसलाई अधिकतम् प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
कसरी गर्ने रिपोर्ट ?
सफा ललितपुर एप नेपाली भाषामा स्पष्ट बुझ्ने शब्दमै छ । एप डाउनडोड गरेपछि ‘सफा ललितपुर’ मेनुमा क्लिक गर्नासाथ ‘फोहोर उठेन रिपोर्ट गर्नुस्’ भन्ने अप्सन देखिन्छ ।
त्यसमा पनि क्लिक गरेपछि क्रमैसँगै पुराना गरिएका रिपोर्ट देखिन्छ भने सबैभन्दामाथि ‘नयाँ रिपोर्ट गर्नुस्’ भन्ने अप्सन देखिन्छ ।
त्यसमा पनि क्लिक गरेरभित्र जानुपर्छ । त्यसपछि भने विभिन्न छोटा विवरणहरु भर्नुपर्छ । जसमा फोहोरको प्रकार, आफ्नो नाम, फोन नम्बर र फोहोरको कुनै विवरण भए भुर्नपर्छ ।
१४ लाख रुपैयाँ जरिवाना
ललितपुर उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्नेहरुविरुद्ध कारवाही अभियान पनि सुरु गरेको छ ।
फोहोर फाल्नेहरुलाई महानगरले कसुरको अवस्था हेरी ५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना गराएको कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले बताए ।
‘साउनयतामात्रै सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्नेहरुबाट १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइसकिएको छ’ पाण्डेले भने, ‘मेडिकलजन्य फोहोर सार्वजनिक स्थानमा ल्याएर फ्याँक्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएका छौं ।’अनलाइनखबर
२३ पुष २०७३, शनिबार १०:३९ मा प्रकाशित